Tag: fironana marketing nomerika | Martech Zone
Tag: fironana marketing nomerika
10 fironana hijerena amin'ny marketing nomerika ho an'ny 2016
Zoma, Martsa 18, 2016 Zoma 17 Novambra 2017 Douglas Karr
Nahazo podcast marketing lehibe izahay izay hiresahantsika ny fanovana tsy mampino izay mitranga ao anatin'ny sehatry ny marketing amin'ny atiny amin'ny marketing nomerika. Saingy ny marketing dizitaly dia mitohy mandalo fanovana tsy mampino ihany koa. Ity infographic avy any Cube ity dia manondro ny farany tokony hojeren'ny mpivarotra amin'ny taona 2016. Ireto misy fironana 10 amin'ny Digital Marketing Return on Investment - ny infographic dia miresaka momba ny fihoarana ny mari-pahaizana toy ny fifamoivoizana sy ny fizarana, fa
Ity misy infografika Ethinos Digital Marketing momba ny fironana ambony; marketing amin'ny atiny, fanatsarana finday, fanamafisana ny tahan'ny fifanakalozana; izay mamaritra ny marketing nomerika ankehitriny ary mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny làlany ho avy. Ny tiako indrindra amin'ity infographic ity dia ny fifantohany amin'ny fandefasana tsara ny paikadim-barotra nomerika. Ao amin'ny World Media Marketing World amin'ity volana ity dia ity no tena hanomezako hevi-baovao sy paikady. Ny mpivarotra dia mifantoka amin'ny TOFU